Glucky မှ ဝန်ထမ်း ၃၇ သန်းကို အစုရှယ်ယာ ထုတ်ပေးမည် - Pandaily
Glucky မှ ဝန်ထမ်း ၃၇ သန်းကို အစုရှယ်ယာ ထုတ်ပေးမည်
Categories: Auto ကိုPandaily ဩဂုတ် 31, 2021 ဩဂုတ် 31, 2021 မှာ Posted
Glucky Automotive Group က တနင်္လာနေ့မှာ ဟောင်ကောင်စတော့ခ်အိတ်ချိန်းမှာ ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့က အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း သန်း ၃၅၀ အထိခွင့်ပြုပြီး ရှယ်ယာဆုကြေးအစီအစဉ်နဲ့ မက်လုံးပေးအစီအစဉ်အတိုင်း အစုရှယ်ယာ ၁၀၈၈၄ ခုအတွက် အစုရှယ်ယာ ၁၆၇ သန်းခန့် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း နောက်ဆုံးဈေးကွက်တန်ဖိုးအရ ယွမ် ၃၇ သန်း (၅.၇၃၀၀.၃ သန်း) ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ယင္းအစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အျခားမက္လံုးမ်ားကို ဆက္လက္အားေပးရန္ ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ေရရွည္တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ကုမၸဏီ၏ရွယ္ယာတန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို အက်ဳိးျပဳရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ Glucky Growth ႏွင့္ Development တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ရှယ်ယာ ဆုကြေးအစီအစဉ်အရ အစုရှယ်ယာ သိန်း ၃၅၀ နှင့် ညီမျှသော အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း ၃.၅၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရရှိနိုင်ပြီး အစုရှယ်ယာ ပမာဏနှင့် ညီမျှသော အစုရှယ်ယာ ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြေညာချက်အရ ဆုကြေးငွေ ၁၆၇ သန်း ထုတ်ပေးမည့် အစီအစဉ်တွင် ရှယ်ယာ ချီးမြှင့်ခြင်း၊ မက်လုံးပေးခြင်း၊ ရှယ်ယာ ချီးမြှင့်ပေးခြင်းများ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
အသစ်ထုတ်ပေးသည့် အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းမှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၀.၀၂ သန်း (၀.၀၀၂၅၇ ဒေါ်လာ)ဖြစ်ပြီး အစုရှယ်ယာ ၁၆၇ သန်းကို အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း ဟောင်ကောင်ယွမ် ၃၃၄ သန်း (၄၂၉,၁၉၇ ဒေါ်လာ)ဖြင့် ပေးထားသည်။ ၂၀၂၁ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ Gili Motor Shipကို ေဟာင္ေကာင္ရွယ္ယာတစ္စု လွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၂၆,၉၀ ျဖင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ဒါကြောင့် ရှယ်ယာ ၁၆၇ သန်းရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၄၄.၉ သန်းလောက် တန်ဖိုးရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးမှာ ယွမ် ၃၇.၃ သန်း ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ၁၀၈၈၄ ဦး ချထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှ ၃၄.၂၇ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃၀၂၆ သန်း) ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Topics: မြင်ကွင်းGlucky 2025 အစီအစဉ်ဖြင့် ကားအစီးရေ ၃၆၅ သန်းရောင်းချမည်
ယင္းရွယ္ယာမ်ားကို ဆုခ်ီး ျမႇင့္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ထည့္တြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား၊ မက္လံုးေပး ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျခားမက္လံုးမ်ား ေပးၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္မွ ၂၀၂၂ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစုရွယ္ယာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလးသုတ္ခြဲ၍ ရယူခဲ့သည္။
Glucky Motor Group ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း Zhejiang ပြည်နယ်တွင် အခြေစိုက်သည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က တရုတ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော “ကျန်းကျန်း အရည်အသွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ဘုံချမ်းသာ” သရုပ်ပြလမ်းညွှန်ချက်” ကို ထောက်ခံကြောင်း၊ ကျန်းကျန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင် ကျန်းကျန်း အောင်မြင်မှုများ ပိုမိုရရှိကာ ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ရရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒီအပြင် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှာ အစုရှယ်ယာ ထုတ်ပေးခြင်း၊ Gili ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း စတဲ့ အစီအစဉ်တွေ အကောင်အထည် ဖော်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အပါအဝင် ဝင်ငွေတိုးပွားရေး၊ မိသားစု ကျန်းမာရေး အာမခံ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မြှင့်တင်ရေး စတာတွေ ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
Zhejiang Gilley Holdings Group ဥကၠ႒ Li Book က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစဖို႔၊ ဝန္ထမ္းအားလံုးရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဂုဏ္သိကၡာကို ပိုမိုတိုးတက္ေစဖို႔၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေစဖို႔ က႑တစ္ခုလံုးကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။
Tags: automaker | Geely∗ | HKEX | STOCK PRICE
Tencent သည် Roborock ၏ စီအီးအို တည် ထော င်သည့် ကား ထုတ်လုပ် မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်
Robot ကိုတည်ထောင် သူနှင့် စီအီးအို Chang Jing ၏ ကား စီမံကိန်း ဖြစ်သော Locke Motors သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။ ဒီ ပတ်ပတ်လည် အားဖြင့်TencentSequoia Capital က အနီးကပ် လိုက်သည်။
NEV ကုမ္ပဏီ BYD သည် စျေး ကြီးသော ကုန်ကြမ်း များနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ များ လျော့နည်း ခြင်းကြောင့် စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် ခဲ့သည်
Shenzhen အခြေစိုက် BYD သည် မကြာသေးမီက ယွမ် ၇၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁ ၁၀၅) စျေးကြီး ပြီး ဖြစ်သော ၎င်း၏ Dynasty နှင့် Ocean စီးရီး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် အသစ် (NEV) မော်ဒယ် များ၏ စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သောကြာနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။
Geely နှင့် Renault တို့သည် တောင်ကိုရီးယား တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်
Renault နှင့် Geely တို့သည် လောင်စာဆီ သက်သာ သည့် ဟိုက် ဘရစ် ကား များနှင့် ဒီဇယ် စက်ခေါင်း များကို ကိုရီးယား ဈေးကွက် သို့တင်ပို့ ရန်နှင့် တင်ပို့ ရန်အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
China Civil Aviation Administration: ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား များ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၂၀% ကျော် ခဲ့သည်
China Automobile Industry Federation မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုသည် ၃. ၅ ၄၅ သန်းနှင့် ၃. ၅ ၂၁ သန်း အသီးသီး ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။